2018 August - News WordPress theme
Xasan Khayre oo Shir-guddoomiyay Kulanka Lagu Dardar Gelinayo Daabacada Shilin Soomaaliga Cusub
Ra’iisul wasaaraha xukuummadda fereraalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta shir-guddomiyay kulan Muqdisho lagu qabtay oo looga hadlay dhaqaalaha dalka kaas oo ka qayb galeen xubna ka socda hay’ado caalami iyo dawladaha ay Soomaaliya bah-wadaagta yihiin. kulanka ayaa ajandayaashiisa ugu waawayn waxaa kamid ahaa dardar-galinta qorshaha samaynta lacagta cusub ee shilin Soomaaliga ah, waxaana dhammaan…
Saraakiisha Ciidanka Dowlada Oo Sheegay Inay Dileen Sarkaal Ajnabi Ah
Hawlgal gaar ah oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan Guutada 14-ka October ay ka fuliyeen gudaha magaalada Marko ayaa waxaa lagu dilay sarkaal Ajnabi Shabaab ah. Saraakiisha ciidanka xoogga dalka ayaa waxa ay sheegeen sarkaalka Ajnabiga ah ee la dilay in lagu magacaabi jiray Sheekh C/naasir Asar-bajaan oo u dhashay wadanka Ruushka. Taliyaha qeybta…
Dagaal Maanta Ka Dhacay Magaalada Beledweyne
Dagaal u dhaxeeyay ciidanka dowladda iyo maleeshiyaad hubeysan oo ku heyb ah Mooto Bajaajle shalay lagu dilay magaalada Beledweyne ayaa galabta wuxuu ka dhacay magaaladaasi. Goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen dagaalkan inuu ka dambeeyay kadib markii ay rasaas bilaabeen maleeshiyaadkan oo tan iyo shalay ku hareereysnaa saldhigga Booliska oo uu ku jiro askariga dilka geystay.…